Nosy Koh Sichang. Pattaya. Thailand ~ Journey-Assist - Ahoana ny fomba hahatongavana amin'izany. Ny fijerin'ny nosy. tora-pasika
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Nosy Koh Sichang. Pattaya. Thailand
Fijery feno ny nosy Koh Sichang. sary
Amin'ity nosy mangina ity, ny mpizahatany matetika dia tonga mivantana avy any Pattaya, reraka amin'ny trano fandraisam-bahiny, na noho ny fahasosorana amin'ny morontsiraka Pattaya. Ny rano ivelan'ny morontsirak'i Ko Sichang dia madio kokoa noho ny morontsiraka any Pattaya.
Ny halaviran'ny Pattaya mankany Koh Sichang dia 30 km
Ny halaviran'ny Bangkok mankany amin'ity nosy ity dia eo ho eo amin'ny 100 km.
Island Area - 17 sq. km
Malalaka ny vonjy taitra. Tendrombohitra avo indrindra 192 m miorina amin'ny tapany avaratry Ko Sichang.
Any amin'ny tapany atsinanan'ny Nosy dia misy vondron-jono maromaro.
Ny faritra atsimo dia tsy mipetraka trano.
Total amin'ny Ko Sichang momba Mponina maharitra 5 000.
Ny toeram-pivarotana lehibe sy ny trano fisakafoanana lehibe tsy misy eto.
Tsy misy afa-tsy kafe kely misy lovia Thai.
Manakaiky ny piara no hany fivarotana rojo ao Ko Sichang. 7 / 11 format kely.
Ny haavon'ny vidiny ao amin'ny nosy dia mitovy amin'ny any Pattaya.
Ny iray amin'ireo fotodrafitrasa momba an'i Ko Sichang dia manana sekoly sy toeram-pitsaboana.
Fametrahana ny nosy. Vidiny eo akaikiny
Betsaka ny hotely amin'ity nosy ity. Na izany aza, ny vidin'izy ireo dia azo antsoina hoe avo be. Ny safidy kely kokoa dia ny trano fandraisam-bahiny, izay ao amin'ny Ko Sichang ihany koa.
Efitra iray ao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray izay manana mari-pana, rivotra mafana, fahitalavitra ary vata fampangatsiahana tamin'ny 700bat
Rehefa faran'ny herinandro dia tokony hotehanana mialoha ny efitrano, satria maro ireo mpizahantany no tonga eto mandritra ny faran'ny herinandro. Mandritra izany fotoana izany, ny ampahany lehibe amin'izy ireo dia ny mponina ao Thailandy tenany.
Mora dia marefo tokoa ny morontsiraka amin'ity nosy ity, fa misy moron-dranomasina. Noho izany dia malaza amin'ny mpizaha tany i Koh Sichang. Na izany aza, tsy ny rehetra no te hilomano 30 km miala ao Pattaya, ka tsy dia feno olona mihitsy ny tora-pasika eo an-toerana. Ity dia ny tombotsoan'i Ko Sichang.
Ankoatr'izany, misy be dia be ny toerana mahaliana an'i Ko Sichang - mihoatra ny any amin'ny nosy hafa akaikin'i Pattaya. Ho an'ny fitsirihana azy ireo manokana dia mety indrindra ny manofa bisikileta.
Ny fanofana bisikileta ao Koh Sichang. vidin'ny
Misy toerana fanofaanana ao amin'ny nosy izay misy ny motera moto iray tamin'ny 250 baht.
Tuk Tuk Island Island Tours
Azonao atao koa ny mitodika any amin'ny tuk-tukers, izay hita ao amin'ny Ko Sichang ary mitarika fitsangatsanganana ny nosy ho an'ireo mpizahatany. Ny faharetan'ny fitsidihana dia 3-4 ora, ny vidiny dia 250 hatramin'ny 400 baht (miankina amin'ny lalana, vanim-potoana, ary koa ny vokatry ny fividianana tamp-tuker amin'ny mpanjifa iray).
Fampahavoana Koh Sichang
Saan Chao Pho Khao Yai Temple Temple Shinoa
Tempolista sinoa Saan Chao Pho Khao Yai ao amin'ny nosy
Eo amin'ny havoana iray. Tsidihin'ny mpivahiny sinoa izy. Ny lakilenan'ny nosy sy ny jiro dia hita mazava avy ao amin'ny sahan'ny tempoly. Eo akaikin'ny tempoly dia misy zohy maromaro misy tsangambato Buddha.
Mahaliana ihany koa satria eo an-tampon'ny havoana dia misy dian-tongotra Bouddha
Tempolista bodista iray hafa, izay trano fotsy ranomandry vita amin'ny fomba nentin'ny maritrano.
Wat Tham Chakkaphong (Wat tham Chakkaphong)
Tempolista bodista iray hafa, izay natsangana tamin'ny fomba nentim-paharazana ho an'ny ankamaroan'ny tempoly any Thailand.
Tempoliny sy ivon'ny fisaintsainana Wat Tham Yai Prik (Wat tham yai prik)
Ho fanampin'ny vahoaka Thailandey, ity andrim-pivavahana ity dia notsidihin'ny vahiny te-hifankahalala bebe kokoa amin'ny Buddhism ary haka fisaintsainana.
Wat Tham Yai Prik Temple and Center meditation on Koh Sichang
Ny olona rehetra dia afaka mandalina tsara ny filozofia bodista Theravada (Hinayana), izay manjaka ao Thailand. Eto ianao afaka mianatra mifantoka sy misaintsaina. Ity fahaiza-manao ity dia ahafahanao mitondra ireo olanao am-pilaminana kokoa sy hahita ny tontolo manodidina anao amin'ny fomba vaovao.
Sary sokitra Big Buddha
Big Buddha ao amin'ny Nosy Koh Sichang
Tsy lavitra an'i Tham Yai Prik no mahasarika finoana ara-pivavahana iray hafa - sary sokitra Buddha. Mijanona eo an-tendrombohitra izany, noho izany dia hita avy amin'ny toerana samihafa misy an'i Ko Sichang, ao koa ny avy amin'ny tsangantsangana. Midika izany fa afaka miakatra eo an-tampon'ny tendrombohitra misy an'io toerana manintona anao io ianao, ary noho ny panorama mahafinaritra izay misokatra avy any. Ilay sarivongana mihitsy dia mijoro amin'ny tongotra an-tongotra. Ny eo akaikiny dia misy sary sokitra hafa mampiseho ny Buddha sy ireo andriamanitra samihafa amin'ny endrika samihafa. Na izany aza, kely kokoa izy ireo noho ny sarivongana lehibe amin'ny habeny.
Taman'i Khao Khat
Khao Khat Park ao amin'ny Koh Sichang
Any amin'ny morontsiraka andrefan'i Ko Sichang. Misy gazebo iray eo amin'ny hantsam-bato manoloana ny ranomasina. Avy eto koa ny tetezana Vashiravut mankany amin'ny sehatra fanaraha-maso hafa.
Royal Residence Rama V
Royal Rama V Summer Residence ao Koh Sichang
Izy io dia tranobe maritrano izay naorina tamin'ny taonjato faha-19. ho an'ny fonenan'ny mpitondra. Ny mpanjaka maoderina any Thailand, Rama IX, dia tsy mampiasa an'io toerana io na amin'ny fomba hafa aza, noho izany dia aorina eto izao ny tranom-bakoka iray.
Torapasika any Ko Sichang
Tora-pasika ao amin'ny Nosy Koh Sichang
Ao amin'ity nosy ity dia iray ihany ny tora-pasika izay ahafahanao milomano marina. Any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Nosy no antsoina hoe Tham Phang.
Ny fotodrafitrasa eo amoron-dranomasina Ko Sichang
Ny fotodrafitrasa amoron-dranomasina momba azy dia novolavolaina mahazatra: misy ny fanofa trano amin'ny seilterie sy ny elo, ny fivarotana mivarotra souvenir, ny akanjo fandroana, sns. Ny tanindrazana dia tsara tarehy eto.
Torapasika eo amin'ny nosy Koh Sichang. sary
Ahoana ny fomba hankanesana any amin'ny Nosy Koh Sichang
Voalohany, mila miakatra ao an-tanànan'i Sri Racha ianao, izay misy bus avy ao Bangkok sy Pattaya, ary koa avy any Trat sy Chantanaburi. Avy any Bangkok ka hatrany Sri Racha, miainga amin'ny fiara fitateram-bahoaka metropolitan (Ekkamai sy Mo Chit), ny dia mandritra ny 2 ora.
Avy any amin'ny gara any Sri Rach dia mila miditra amin'ny pier an'i Ko Loy ianao. Afaka mampiasa tuk-tuk ho amin'izany ianao. Sambo haingana dia miala amin'i Ko Loy mankany Ko Sichang isan'ora. Ny tapakila ho azy ireo dia amidy any amin'ny marina. Mandeha adiny iray eo ho eo ny dia an-dranomasina.
Amin'ny Koh Sichang irery, marina ny iray, izay ahafahanao maka tuk-tuk mankany amin'ny hotely na trano hilazana.
Nosy Koh Sichang amin'ny sari-tany
Hevitra momba ny nosy Koh Sichang. Pattaya (Google)